Ostia Antica रोम देखि वरिपरि 30km दूर प्राचीन बन्दोबस्त छ. प्राचीन को दिनमा फिर्ता, यो शहर रोम को एक प्रमुख बंदरगाह थियो र यहाँ हेर्न प्रशस्त छ. उदाहरण को रुपमा, तपाईं सुन्दर मोज़ेकको साथ सार्वजनिक स्नानहरूमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ.
रेल बन्द हप रोम देखि एक घन्टा लामो सवारी पछि, र तपाईं Bracciano आइपुगेको हुनेछ. यो सुन्दर मध्ययुगीन शहर Bracciano लेक को किनारा मा प्रशस्त छ प्रस्ताव गर्न ठाँउहरु. उदाहरणका लागि, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ Orsini Odesalchi क्यासल, जुन धेरै कुलीनहरूको निवास थियो.
डेट्रिप्स ट्रैवलफ्लोरेन्स यात्रा ट्राभ्रोम traveltips